ACMIL Antsirabe : Nandray ny ambasadaoron’ny Vondrona Eoropeana
Nitsidika ny Akademia Miaramila Antsirabe androany alatsinainy 25 Janoary ny Ambasadaoron’ny Vondrona Eoropeana, Antonio Sanchez Benenito Gaspar. Sambany teo amin’ny tantaran’ity sekoly ambon’ny manamboninahitra ity no nisy olona ambony avy amin’ny Vondrona Eoropeana nitsidika ny ACMIL raha ny nambaran’ny komandin’ny sekoly sy ny vahiny. Antony moa dia eo ny maha sekoly ambony miavaka azy aty amin’ny faritra atsimon’i Afrika sy ny ranomasina Indiana ka nahasarika ity olona ambony ity. Fa eo ihany koa ny ezaka ataon’ny sekoly amin’ny fanofanana ireo manambonihahitra hiatrika ny fampandrosoana sy ny fiarovam-pirenena.
Fitokanana ny kianja mitafo Mahajanga
dimanche, 24 janvier 2016 22:37
Mahajanga : Daddy ben'ny tanàna vaovao?
Rehefa novaina in-telo moa tao anatin'ny herin'andro ny anaran'ity kianja mitafo fanatanjahantena ity dia tonga nitokana izany ny Filoha Rajaonarimampianina tany Mahajanga anio alahady tolak'andro.